fampitandremana: Fampiasana AFF_LINK tsy voafaritra tsy voafaritra - noheverina ho 'AFF_LINK' (hiteraka hadisoana amin'ny dikan-teny PHP ho avy izany) /media/actualidadgadget.com/website/wp-content/plugins/abn-appstore/definitions.php amin'ny tsipika 22
Asus TUF Dash F15, ny hery sy ny famolavolana dia afaka miara-miasa | Vaovao momba ny gadget
Asus TUF Dash F15, ny hery sy ny famolavolana dia afaka miara-miasa
Miguel Hernandez | | General, solosaina, portable, hevitra
Ny solosaina Desktop dia miha tsy eo amin'ny birao finday, raha ny tena izy, na dia ny mpilalao indrindra aza, ny mpijery lehibe indrindra an'ity karazana solosaina ity, dia mifindra amin'ny endrika azo entina amina taona vitsivitsy lasa izay noho ny endrika vaovao sy ny endri-javatra mahery vaika omen'izy ireo.
Ny Asus Dash F15, solosaina finday misy endri-javatra miavaka sy famolavolana izay mahatonga azy io ho mpampiasa be, tonga eo amin'ny latabatra andrana. Hodinihintsika lalina ity solosaina finday malaza ity izay angamba ianao tonga noho ny endri-javatra fa kosa ianao dia hividy ny famolavolana, aza hadino izany.
Toy ny tamin'ny fotoana maro hafa, ny famerenana horonan-tsary feno eo an-tampony dia hampiseho aminao ny unboxing sy ireo endrika mampiavaka azy. Aza adino ny misoratra anarana fantsona YouTube anay mba hahafahanay manohy mitondra an'ity atiny mahaliana ity aminao. Raha tianao izany dia azonao atao ny mividy azy amin'ny Amazon amin'ny vidiny tsara indrindra.
1 Fitaovana sy endrika: Elegance tsy misy habibiana
2 Ny Hardware sy ny GPU dia mampanantena antsika ny ho avy
3 Fifandraisana isan-karazany
4 Fitsapana sy fampangatsiahana
5 Multimedia sy traikefa amin'ny ankapobeny
6 Hevitry ny Editor
7 Tombontsoa sy lafy ratsy
Fitaovana sy endrika: Elegance tsy misy habibiana
Raha misy zavatra mampiahiahy ahy amin'ny solosaina filokana, dia ny andalana mahery setra, ny lokony manaitra ary ny hateviny be loatra. Asus amin'ity TUF Dash F15 ity dia mandray izany rehetra izany ary manaparitaka azy, toy ny diamondra ihany. Manana solosaina misy mombamomba antsika 19,9 milimetatra, vita amin'ny hybrid metaly sy plastika mifanaraka amin'ny fenitry ny miaramila MIL-STD, Ny faharetana dia lafiny iray manan-danja amin'ny ankapobeny amin'ny vokatra ASUS rehetra ary amin'ity dia tsy hihena izany.
Manana fahazoana roa loko isika, ny Moonlight White sy Eclipse Grey (fotsy sy fotsy volondavenona amin'ny fotony). Amin'ny tapany ambony dia misy ny TUF voalohany sy ny fango vaovao an'ny marika. Nandinika ny maodely tamin'ny volondavenona mainty izahay ka hifantoka amin'izany. Amin'ny lafiny roa dia manana seranana fifandraisana ara-batana izay horesahintsika avy eo. Ny sary aseho, na dia manify kely aza dia manana burr ambany ambany. Ny lanjan'ny 2 Kg, raha tsy fanasitranana, dia maivana amin'izay atolotry ny sehatra.
Ny Hardware sy ny GPU dia mampanantena antsika ny ho avy
Mazava ho azy fa hanomboka amin'ny zavatra tena manan-danja indrindra isika, ny latabatra fandrefesana izay manasongadinana ny processeur Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz, 4 cores (Cache 12M, hatramin'ny 4,8 GHz). Mba hamindrana azy dia manana Windows 10 Home efa napetraka mialoha amin'ny fanavaozana Windows 11 maimaim-poana izahay. Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, miaraka amin'ity maodely ity modely fahatsiarovana 8GB 4MHz DDR3200 roa, miaraka amin'ny capacitable configurable maximum hatramin'ny 32 GB RAM.
processeur: Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz, 4 cores
Ny fitehirizana ny singa voasedra dia 512 GB an'ny memo M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD izay manolotra hafainganana amin'ny fitsapana ataonay ny 3400 MB / s vakiana ary 2300 MB / s manoratra, mihoatra ny ampy hamindrana ny OS sy ny lalao video. Azontsika atao, eny, misafidy ilay singa mitovy amin'ny fahaizan'ny 1 TB.
Mifantoka amin'ny zava-dehibe isika izao, ny NVIDIA GeForce RTX 3070 izay ho tompon'andraikitra amin'ny sehatry ny sary ary nanolotra ny «laptop» ao amin'ny kinova «fampisehoana» tamin'ny Geekbenck 121069 isa, tena akaiky ny kinova desktop an'ny NVIDIA GeForce RTX3070.
Manomboka amin'ny fifandraisana ara-batana isika, Eo amin'ny ilany ankavia dia manana ny seranan-tseranana fananana isika, seranan-tsambo Gigabit RJC45 iray manontolo, HDMI 2.0b, USB 3.2 ary USB-C Thunderbolt 4 - Power Deilvery miaraka amina Jack 3,5mm. Ho an'ny lafiny ankavanana dia manana USB 3.2 mahazatra sy ny kitendry Kensington izahay.
Thunderbolt USB-C 4 PD
Mazava ho azy, raha feno tanteraka ilay fizarana tariby, miaraka amin'izany USB-C mifanaraka amin'ny mpanara-maso 4K amin'ny 60Hz ary miaraka amin'ny entana hatramin'ny 100W, ho an'ny faritra tsy misy tariby dia mety tsy ho latsa-danja izany. Manana isika Bluetooth 5.0 sy WiFi 6, Ity fizarana farany tamin'ny fitsapana nataonay ity dia niteraka fahatsapana mifanohitra amin'ny tambajotra 5 GHz izay voafetra ny fari-potoana ary mety tsy araka ny tiana ny ping, amporisihinay hampiasa ny tariby na eo aza ny mifanentana ambony.
Fitsapana sy fampangatsiahana
Ny solosaina dia manana mpankafy efatra, 83 lada tsirairay, ary rafitra fanamafisana ny fanoherana ny vovoka. Fantsona hafanana dimy amin'ny ankapobeny ho an'ny fitaovana iray manontolo ary ny valiny izay no antenaina amin'ny solosaina amin'ity karazana ity amin'ny tapaky ny fahavaratra, mafana, mafana be. Na izany aza, tsy nahazo valiny mahasosotra izahay na manavaka azy amin'ny fifaninanana, ka toa ampy ny fihenan-tsasatra.
Vidio ny Asus TUF Dash F15 amin'ny Amazon
Amin'ny fitsapana anay, fahombiazan'ny solosaina Ao amin'ny Cities Skylines, Call of Duty Warzone sy CS GO dia nanana taha ambony FPS be izahay, tsy nisy olana na fampafanafana izany. Noho ny antony mazava dia ho hain'ny solosaina finday ny mandray an-tanana ny ankamaroan'ny katalaoginao amin'ny toe-javatra mijery tsara indrindra.
Multimedia sy traikefa amin'ny ankapobeny
Tsy hiala izahay raha tsy miresaka momba ny efijery, manana tontonana 15,6-inch isika amin'ny refy 16: 9, Tiako ny fitsaboana anti-glare azy ary afaka mampiseho 100 ny spectrum sRGB, miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 120 Hz izay tsy ratsy mihitsy ho an'ny tontonana IPS. Mazava ho azy, azo hatsaraina ny famirapiratana, na dia tsy niditra tamin'ny data marina momba ny famirapiratany isaky ny cd / m2 aza isika. Mazava sy matanjaka ny feo hankafizany atiny multimedia, miaraka amina toerana tsara amin'ny ankapobeny.
Tsy manana webcam izahay
Ny fitendry dia manana dia tsara, mitovy amin'ny fomba "filalaovana" bebe kokoa. Manana pirinty sy fantsom-pirinty RGB manerana ny toerana izahay, miaraka amin'ny 1,7mm feno. Mangina izany, zavatra ankasitrahana ary mamaly tsara. Tsy afaka milaza toy izany momba ny trackpad isika, toa kely sy tsy marim-pototra izany, saingy tsy olana amin'ity solosaina ity, fa saika ireo rehetra izay tsy novolavolain'i Apple. Tsy dia misy dikany ny miresaka momba ny fizakan-tena, miankina betsaka amin'ny filàna milalao izany, adiny roa mahery fotsiny, dia mamporisika anao izahay hampiasa azy io hifandray.
Hevitry ny Editor
Ity solosaina finday ity ampahany amin'ny 1.299 ho an'ny kinova fidirana, hatramin'ny 1.699 euro amin'ilay kinova izay nozahanay toetra, fomba hafa mahaliana indrindra amin'ireo fitaovana azontsika eny an-tsena noho ny endriny sy ny fahaizany.
Tombontsoa sy lafy ratsy
Famolavolana vaovao sy fitaovana vita tsara
Fitaovana hifanaraka amin'ny ho avy mampanantena
Fihetseham-po amin'ny fampiasana sy fifandraisana
Vidiny somary avo
Ahitana adaptatera A / C fa tsy USB-C
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Asus TUF Dash F15, ny hery sy ny famolavolana dia afaka miara-miasa
Nanavao ny fifehezana ny feo Alexa i Amazon ary nosedrainay izany
SoloCam E20, fakantsary an-kalamanjana be mpampiasa avy any Eufy [Review]